लगातार घटेको बजार १४६९ विन्दुमा | गृहपृष्ठ
As of 2018-06-24 11:09:13
UMB 2002 (30) (-35)
Home मुख्य खबर लगातार घटेको बजार १४६९ विन्दुमा
लगातार घटेको बजार १४६९ विन्दुमा
मङ्सिर ४, काठमाडौं । सोमवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ४४ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार शुरुभएदेखि उतारचढावमा रहेको बजार अन्त्यमा ६ दशमलव ५६ अङ्कले घटेर १ हजार ४ सय ६९ दशमलव १६ विन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै, सो दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव ४९ प्रतिशतले बढेर ३ सय ९ दशमलव शून्य ८ अङ्क पुगेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा सो दिन कारोबार रकम घटेर रू. ३९ करोड ७७ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. ६ अर्ब घटेर रू. १७ खर्ब ६ अर्बमा पुगेको छ । ‘अन्य’ समूह बाहेक कारोबारमा आएका बाँकी समूहहरुको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको हो ।
ग्रीन डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयर मूल्य ९ दशलमव ९६ प्रतिशत बढेर अन्तिम मूल्य रू. ५ सय ८ पुगेको छ । यस विकास बैङ्कले १ बराबर ४ अनुपातमा रू. एक सय अङ्कित दरको ४० लाख कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न सेवोनले स्वीकृत गरेको छ । जसका कारण लगानीकर्ताहरु यस बैङ्क प्रतिशत आकर्षित भएका हुन । नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको मूल्य भने ८ सय ९९ प्रतिशत घटेको छ । एभरेष्ट बैङकको रू. २ करोड ६७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस वाणिज्य बैङ्कको शेयर मूल्य रू. ३ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार १ सय ४५ पुगेको छ । यस बैङ्कको २ सय ४५ पटकको व्यापारमा २३ हजार ३ सय ६१ कित्ता शेयर किनबेच भएको हो । साथै, सिभिल बैङ्कको रू. २ करोड ५३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएर अन्तिम मूल्य रू. २ सय २७ पुगेको छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कको रू. १ करोड ७८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
‘अन्य’ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ३५ प्रतिशतले बढेको छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको शेयर मूल्य बढेपछि यस समूहको परिसूचक २ दशमलव ८९ अङ्क बढेको हो । व्यापार समूहको परिसूचक भने ५ दशमलव ३८ प्रतिशतले घटेको छ । साथै, होटल समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य २ प्रतिशत, जलविद्युतको शून्य दशमलव ७४ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत घटेको हो । त्यस्तै, वित्त कम्पनी समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ५६ प्रतिशत, बैङ्किङको शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत, बीमाको शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत र विकास बैङ्कको शून्य दशमलव ३ प्रतिशत घटेको छ ।
यस दिन ५२ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । त्यस्तै, ९२ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने १७ कम्पनी स्थिर रहेका छन् । सो दिन १ सय ६१ कम्पनीको ४ हजार ६ सय ८८ पटकको व्यापारमा ११ लाख ५२ हजार ५ सय ४० कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ३६ दशमलव ४८ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो भने शून्य दशमलव ५६ अङ्क रहेको छ । यसले बजार बियरिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।